Ogaden News Agency (ONA) – EU oo Sheegtay Inay Iska Difaaci Doonaan Xayiraada Maraykanka.
EU oo Sheegtay Inay Iska Difaaci Doonaan Xayiraada Maraykanka.
Posted by ONA Admin	/ May 18, 2018
Midowga Yurub (EU) oo soo gaba gabeeyey kulan ay ku lahaayeen magaalada Sofia ee dalka Bulgaria ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan cunaqabateynta Maraykanku (USA) ku hanjabay.
Xiisada ka dhalatay go’aankii USA uga baxay heshiiskii Barnaamijka Nukliyeerka ee Iran ayaa u muuqata inay sii kala fogeysay xulafadii EU iyo USA oo ku hanjabaya in uu cunaqabateyn saari doono cid walba oo xidhiidh ganacsi la sameysa wadanka Iran.
Dalalka EU oo iyagu qeyb ka ahaa heshiiskaasi lala galay Iran sanadkii 2015 ayaa iyagu sheegay inay ixtiraami doonaan heshiiskaasi, xili laga cabsi qabo in xayiraada cusub ee ganacsi oo uu USA saaray Iran ay saameyn ku yeelato shirkadaha laga leeyahay dalalka EU oo iyagu heshiisyo ganacsi la galay wadanka Iran.
Wadamada EU-da oo shir ku yeeshay magaalada Sofia ee dalka Bulgaria, labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sheegay in ay ku mideysan yihiin in ay difaacaan heshiiskii Iran iyo waliba shirkadahooda ganacsiga laleh dalkaasi.
Xiisadan ayaa waxaa sii fogeeyey Lataliyaha cusub ee Donald Trump, Mr.John Bolton oo wareysi uu todobaadkan bixiyey ku sheegay in Maraykanku uusan ka waaban doonin in uu cunaqabateyn iyo ganaax dul dhigo shirkadaha laga leeyahay Yurub ee ganacsiga la sameeya Iran.
Madaxweynaha Golaha EU-da, Mr.Donald Tusk oo ka hadlayey shirkii ka dhacay Bulgaria ayaa si adag uga jawaabay hadalada kasoo yeedhay Maraykanka isagoo sheegay in EU aan loo hanjabi karin. Tusk ayaa sheegay in Dowlada Maraykanka iyo madaxa Washington ay u qabaan ciyaar ciyaar halka ay hada xiisadan mareyso.
EU ayaa ku heshiiyey in ay dhaqan galiyaan shuruuc ay horey u sameysteen sanadkii 1996, kuwaasi oo ka xijaabaya shirkadaha reer Yurub ee ganacsigooda ay la leeyihiin Iran u isticmaala lacagta dollarka, si aan dacwad iyo ganaax uga iman Maraykanka.
Qaar kamid ah dalalka EU-da ayaa sidoo kale soo jeediyey in Midowga Yurub uu lacagtiisa Yuro (EURO) u isticmaalo ganacsiga Shidaalka ee kala dhaxeeya Iran, taasi oo dhalin karta xiisad horleh oo caalami ah. Shirkadaha waaweyn ee laga leeyahay Yurub sida; Airbus, Total iyo Maersk ayaa kamid ah kuwa hada heshiisyo ganacsi oo ku kacaya balaayiin dollar kula jiray wadanka Iran.